कसरी तपाइँको ब्रान्डको लागि सही रंग प्यालेट छनौट गर्ने क्रिएटिव अनलाइन
जब हामी एक ब्रान्डको दृश्य पहिचान डिजाइन गर्दै हुन्छौं, हामीले परिभाषित गर्नु पर्ने पहिलो चीजहरू यो हो रंग प्यालेट। लोगो + कलर प्यालेट संयोजन तपाईको ब्रान्डको ब्यबहार हो, जसले तपाईलाई बजारमा तपाईको स्थिति अनुसार ग्राहकले तपाईलाई चिनोस्।
तर, सहि र color्ग प्यालेट फेला पार्न सँधै सजिलो हुँदैन। यदि हामी डिजाइनरहरूको रूपमा आफ्नै दृश्य पहिचान परिभाषित गरिरहेछौं भने पनि हामी आफूलाई सडकको बिचमा हराएको फेला पार्न सक्छौं। मेरो मतलब, हामीसँग केही विचारहरू छन् जुन मुख्य र colors्गहरूले हाम्रो लागि काम गर्न सक्छ, तर पूर्ण प्यालेट तपाईको लोगोको मुख्य रंग मात्र होईन, sino सबै रंगहरू यसको साथ छन् र जुन तपाईंको उत्पादनहरूमा लागू हुनेछ, प्याकेजि,, वेबसाइट, सामाजिक नेटवर्कहरू, आदि।
उस्तै हुन्छ जब हामी ग्राहकको लागि काम गरिरहेका हुन्छौं, उसको दिमागमा केही रंग हुन सक्छ, तर बाँकी बाँकी हाम्रो परिभाषा गर्न नै रहन्छ। हामीले उत्तम रंग संयोजन फेला पार्नु पर्छ यो फिट छ तपाईंको ब्रान्डको व्यक्तित्व।
1 प्यालेटमा कति रंगहरू हुनुपर्दछ?
2 तिनीहरूलाई कसरी छनौट गर्ने?
3 एडोब रंग
प्यालेटमा कति रंगहरू हुनुपर्दछ?
सामान्यतया कुनै ब्रान्डको ग्राफिक पहिचान हुनुपर्दछ प्यालेटमा to देखि colors रंगहरू। ती मध्ये दुई वा तीन प्रमुख हुनु पर्छ। र बाँकी रंगहरू छन् जुन पूरकसँग पूरक हुन्छ वा मिसिन्छ।
यदि तपाईं हुनुहुन्छ भने, उदाहरणका लागि, तपाईंको वेब पृष्ठमा र p प्यालेट लागू गर्दै, सेक्सनहरूको नाम तपाईंको दुई मुख्य रंगमा जान सक्दछ: मेरो बारेमा, उत्पादनहरू, सेवाहरू, सम्पर्क, आदि, जबकि तपाईंको सामाजिक नेटवर्कमा जडान हुने बटनहरू। सम्पर्क सेक्सनमा, तिनीहरू पूरक रंगहरूमा जान सक्छन्। त्यो भन्नु पर्ने हो, सामग्रीको महत्त्वको आधारमा, र colorsहरू लागू हुनेछन्।
ब्रान्डिंगका लागि रंग प्यालेट
तिनीहरूलाई कसरी छनौट गर्ने?
रंगहरू छनौट गर्न राम्रो तरिका पहिलो हो कुञ्जी शब्दहरू चयन गर्नुहोस् जुन तपाईंको ब्रान्ड वर्णन गर्दछ। तपाईं गर्न सक्नुहुन्छ दिमाग दिमागमा आउने सबैसँग, र ती मध्ये केवल तपाईं मात्र महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूसँग बस्नुहुनेछ। -5-१० शब्द ठीक छ।
यदि तपाईं आफ्नै ब्रान्डको साथ काम गर्दै हुनुहुन्न भने, तपाइँको ग्राहकलाई प्रश्नावली वा ब्रीफिंग प्रदान गर्नुहोस् ताकि ऊ आफैंले आफ्नो कम्पनी को शब्दहरु परिभाषित गर्दछ।
उदाहरण को लागी, यदि तपाई एक होटेल को ग्राफिक पहचान को विकास गरी रहे छ भने तपाईले शब्दहरु राख्न सक्नुहुन्छ: आराम, प्रकृति, लक्जरी, उष्णकटिबंधीय, समुद्री किनार, इकोटोरिज्म, आदि।
एकचोटि तपाईंले तिनीहरूलाई चयन गर्नुभयो, खोजी गर्नुहोस् Pinterest सबै भिजुअल सन्दर्भ जुन तपाइँको शब्दहरु लाई मिल्छ: फोटोग्राफ, र ,्ग, चित्र, ढाँचा, बनावट, आदि। तपाइँको कम्प्युटरमा एक बोर्ड वा एक फोल्डरमा तिनीहरूलाई बचत गर्नुहोस्, र तपाइँले ती छविहरू महसुस गर्नुहुनेछ रंग योजनाहरू जुन प्रबल हुन्छ र त्यो एक अर्कासँग मिल्दोजुल्दो छ।
तपाईं पनि गर्न सक्नुहुन्छ मुडबोर्ड बनाउनुहोस् तपाईंलाई संकलन गरेको सन्दर्भलाई अझ राम्ररी कल्पना गर्न मद्दत गर्न। यहाँ हामी तपाईंलाई एक लेख छोड्दछौं ताकि तपाईं कसरी मुडबोर्ड सिर्जना गर्ने सिक्न सक्नुहुन्छ।
यो गरेको संग, तपाईं याद गर्नुहुनेछ त्यहाँ र colors्गहरू छन् जुन तपाईंको ब्राण्डको व्यक्तित्व अझ राम्रोसँग प्रस्तुत गर्दछन्। ती सबै मध्ये, तपाईं हुनेछ प्रमुख रंग चयन गर्नुहोस् वरपर सबै अरूहरू छनौट हुनेछन्।
निश्चित गर्नुहोस् तपाईंको प्रमुख रंग हडताल र अधिमानतः बलियो छ (कमसेकम तपाइँको छनौटको बाँकी तुलनामा)। याद गर्नुहोस् कि यो रंग एक तपाइँको ब्रान्ड को प्रतिनिधित्व गर्दछ कि एक हुनेछ, त्यसैले यो यादगार हुनु पर्छ र ग्राहकहरु सजिलै संग कम्पनी संग संगत गर्न सक्षम हुनु पर्छ।
यस प्रमुख र To्गमा तपाइँ आवाश्यक छ एउटा र color थप गर्नुहोस् त्यो मेल खान्छ। यो जान सक्छ यसको विपरितमा वा पूरक रूपमा पहिलोको साथ, र यी तपाईंको प्यालेटमा मुख्यहरू हुनेछन्।
रंगीन प्यालेटको लागि प्रमुख रंगहरू चयन गरियो।
अब तपाईले बाँकी छनौट गर्नु पर्छ दोस्रो रंग त्यो प्रिन्सिपललाई समर्थन गर्दछ। यो उनीहरूको भन्दा राम्रो छ हल्का, कम स्पष्ट र ध्यान आकर्षण छैन बाँकी भन्दा माथि। प्रबल र समर्थकहरू बीच सामंजस्यपूर्ण संयोजन प्राप्त गर्न, तपाईं केहि उपकरणहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंलाई र colors मिसाउन मद्दत गर्दछ।
यो उपकरण नि: शुल्क र प्रयोग गर्न धेरै सजिलो छ। यसले तपाईंलाई मद्दत गर्दछ तपाईंले चयन गर्नुभएको रंगबाट रंग प्यालेटहरू सिर्जना गर्नुहोस् र appears्गमय सर्कलमा त्यहाँ देखा पर्दछ। एक पटक छनौट गरेपछि, कार्यक्रमले तपाईंलाई सबै दिनेछ कोटिहरू द्वारा सम्भव संयोजनहरू: एनालग, पूरक, ट्रायड, यौगिक, टोन र कस्टम।
साथै, यदि तपाईं लग इन गर्नुहोस् रचनात्मक बादल, तपाईं र schemes्ग योजनाहरू बचत गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंलाई सबैभन्दा धेरै मनपर्‍यो र भविष्यका कामका लागि तिनीहरूलाई प्रयोग गर्नुहोस्।
र Color प्यालेट एडोब र Colorमा उत्पन्न भयो
एडोब र Color्गको विपरित, यो उपकरण अनियमित रंग प्यालेटहरू उत्पन्न गर्नुहोस् केवल कुञ्जीपाटीमा स्पेस बार थिचेर। यदि तपाईं द्रुत र सही समाधान खोज्दै हुनुहुन्छ भने यो धेरै उपयोगी छ। यो पनि तपाईंलाई अनुमति दिन्छ यसको कोड मान टाइप गरेर विशिष्ट रंगको लागि खोजी गर्नुहोस् र तिनीहरूको सम्बन्धित प्यालेटहरू उत्पन्न गर्नुहोस्।
Coolors.co मा र Color्ग प्यालेट उत्पन्न एक पटक तपाईं तपाईंको दुई वा तीन माध्यमिक रंगहरू परिभाषित गर्नुभएपछि, तपाईंसँग पहिले नै तपाईंको ब्रान्डको रंग प्यालेट तयार छ!
रंग प्यालेटको लागि माध्यमिक रंग
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » ग्राफिक डिजाइन » कसरी तपाइँको ब्रान्डको लागि सही रंग प्यालेट छनौट गर्ने
स्कान्डिनेभियाई शैली ग्राफिक डिजाइन: तपाइँको अर्को परियोजनाहरु को लागी प्रेरणा पाउनुहोस्